I-69 YEYONA TAPER ILUNGILEYO YOKULUNGISWA KWEENWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-Taper Fade Haircuts
I-taper fade haircut yenye yeenwele ezithandwa kakhulu ngamadoda. Ngelixa i-taper kunye nokuphela kweentlobo ezimbini ezahlukeneyo zokucheba iinwele, zombini zidibanisa ukwenza…
I-taper fade haircut yenye yeenwele ezithandwa kakhulu ngamadoda. Ngelixa i-taper kunye ne-fade ngokwenene zimbini iintlobo ezahlukeneyo zokucheba iinwele, zombini zidibanisa ukwenza i-taper fade. Ukudibanisa okuninzi, okusikiweyo okucocekileyo, kunye nokudibanisa phakathi kwale mihla kunye neklasikhi, zininzi izinto ezahlukeneyo zetaper. Nokuba uneenwele ezithe nkqo, ezingqindilili, ezibhityileyo, ezi-wavy okanye ezigobileyo, i-taper fade yeyona ndlela yokucheba iinwele ezimfutshane emacaleni nasemva.
Ukuba ujonge ukufumana i-taper, nazi ezona zilungileyo zokuphelisa iinwele zamadoda. Ukusuka kwindawo ephantsi, ephezulu, ephakathi, yolusu kunye ne-bald taper emacaleni ukudibanisa ukusika kunye nokufutshane, ubude obuphakathi okanye iinwele ezinde ngaphezulu, jonga ingqokelela yethu yemifanekiso ukufumana i-taper fade iinwele ezipholileyo!
1Yintoni iTaper Fade?
MbiniIndlela yokucela iTaper Fade
3Uyisika njani iTaper Fade
4Taper vs Fade: Yintoni umahluko?
5I-Taper Fade Haircuts
5.1Ukuphela kweTaper ephantsi
5.2Ukuphela kweTaper ephezulu
5.3Ukuphela kweTaper Tade
5.4I-Taper Fade + iinwele ezinde
5.5I-Taper Fade + iinwele ezimfutshane
5.6Ukuphela kweTaper Bald
5.7Ulusu lweTaper Fade
5.8Ikama Ngaphezulu kweTaper Fade
5.9Ukupheliswa kweTaper Fade
5.10I-Taper Fade Afro
5.11Ukuphela kweTaper ephezulu
5.12Iinwele eziTyiweyo eziTyhafileyo ziyaphela
5.14Ukuphela kweTaper Fade
5.15Icandelo elisecaleni iTaper Fade
5.17Isityalo saseFrance siPhezulu + kwiTaper Fade
5.18Umkhwa weTaper Fade
5.19Ukuhlawula iTaper Fade
5.20IPompadour Taper iphela
5.21Ukuphela kweTaper ngeCandelo
5.22Umgca weTaper phezulu
5.23Amacandelo amafutshane kunye neTaper Back
5.24Umnumzana uTaper Fade
5.25Amacandelo eTapered + Ede phezulu
5.26Intamo yeTaper Fade
5.27Ukuphela kweTaper Fade
5.28Ukulahla iTaper Fade
5.29I-Taper Fade Mohawk
5.30Icala elitshintshiweyo leTaper Fade
Yintoni iTaper Fade?
I-taper fade haircut yindlela yokucheba iinwele emacaleni nasemva. I-taper fade iqala ngeenwele ezinde ngaphezulu kwaye ngokuthe ngcembe inciphise iinwele ezimfutshane emazantsi entloko. Inkqubo yokuphela idibanisa iinwele ezinde ngaphezulu emacaleni ukwenza isitayile esicocekileyo okanye esicocekileyo.
Inkqubo yokucoca ihlala yenziwa ngesikere kunye nezikere. Ubukhali kwaye ucocekile, isiphumo sothelekiso oluphezulu, iinwele eziphantsi zokugcina ezingadingi nasiphi na isitayile kwaye ngaloo ndlela sigxininisa iinwele ngaphezulu.
Indlela yokucela iTaper Fade
Xa ubuza i-barber yakho ye-taper fade haircut, kuyakufuneka wazi ukuba uphakame okanye uphantsi kangakanani ufuna ukuba ukuphela kuqale kwaye mfutshane kangakanani ufuna ukusikwa. Ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo zokucheba iinwele, kubalulekile ukwazi indlela yokuthetha nomchebi wakho wokucheba ukuze usike kunye nesimbo osifunayo.
Umzekelo, unokucela into ephezulu, ephakathi okanye ephantsi. Isiphelo esisezantsi siqala ngaphezulu kweendlebe zijikeleza macala nasemva. Ukuphela okuphezulu kudityaniswa kanye phezulu emacaleni kwaye ngokukhawuleza uthinte iinwele.
Olunye uqwalaselo lokugcina engqondweni kukuba lufutshane okanye lide kangakanani ukuba ufuna amacala aphelileyo kwaye ubuye ubekho. Kulapho ubukhulu bobunqaphi bokuchofoza zibalulekile. A impandla iyaphela , okanye inani elingu-0 liyacima, lisika iinwele zakho kwaye liphelise ukubonakala kolusu lwakho.
Ukuphela okuqhelekileyo, okuhlala kufana nethayile yeklasikhi okanye inombolo yesi-2 okanye yesi-3, zibhengeza iinwele ezimfutshane kodwa zishiya ubude obuthile.
Ezinye izinto ezifihlakeleyo zibandakanya temp , kwagqabhuka, kwincakuba, yaye ukuhla . Isitshetshe sokuphela ngokuqinisekileyo apho umchebi wakho achebe amacala. Ukuphela kwetempileni kuqala kwiitempile kwaye kucoca iinwele. Ukuqhaqha okuphelileyo kujikeleze iindlebe kunye nokuhla kwentamo ukubonakala okhethekileyo. Kwaye ukuphela kokonakala kuqala phezulu okanye ezantsi kwaye kujikeleze intamo entanyeni, ukuyenza yahluke kancinci.
Uyisika njani iTaper Fade
Ukusika i-taper fade, uyakufuna isibini esifanelekileyo seenwele kunye neesayizi ezimbalwa zokugada zenkqubo yokudibanisa. Ukuba ucocekile, usike ucocekile, sicebisa ukuba undwendwele indawo yokucheba iinwele. Ukwenza ukuphela, iinwele ezingaphezulu kufuneka zibe yeyona ndawo inde yokusikwa. Izinwele emacaleni nasemva kufuneka emva koko ziqhubeke zifutshane.
Sebenzisa ubukhulu obahlukeneyo bokugada okucofileyo, cofa iinwele kancinci. Nangona kunjalo, unokuthatha isigqibo sokuba ufuna ukuphela ngokukhawuleza okanye ngokuthe chu.
Ukucheba iinwele zakho kunye nokwenza i-taper fade ngokufanelekileyo ekhaya, kuyakufuneka ungagungqi ukuzidibanisa iinwele zakho ukuze zikhangeleke ngokwendalo zihleliwe ukusuka kubude ukuya kolunye.
Taper vs Fade: Yintoni umahluko?
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kukho umahluko phakathi kwetaper kunye nokuphela. Nangona abachebi basebenzisa ukusika kokubini ukutshintsha ngokutyibilikayo phakathi kobude obahlukeneyo beenwele, itaper yeklasikhi yahlukile kunokuphela kwendabuko.
Xa uthelekisa i-taper vs fade, i-tapered cuts ishiya i-thicker, iinwele ezinde emacaleni ngelixa ziphela iinwele ezinqamlezileyo zimfutshane kakhulu kwaye zisiya eluswini.
Ekugqibeleni, i-taper fade kukucheba kweenwele okwangoku okudibanisa ezona ndawo zingcono kuzo zombini iindlela zokusika. Mfutshane, ehamba phambili, kunye ne-iconic, yenye yeendlela eziphambili zokucheba iinwele zamadoda!
Ukuphela kweTaper ephantsi
I-taper fade esezantsi isitayile kwaye kulula ukuyifumana, kwaye iyaqhubeka nokuba yeyona ndawo ithandwayo yokucheba iinwele kubafana. I-taper ephantsi inokudibaniswa naliphi na inani leenwele zamadoda zakudala kunye nezanamhlanje. Ngelixa ukusikwa okuphantsi kusanikezela ngamacala amafutshane emveli kunye nasemva, iinwele ezinamathelayo azibonisi kakhulu isikhumba entloko.
Ukusuka kwicala elisecaleni ukuya kwi-quiff ukuya kwikama ngaphezulu, ukuphela okuphantsi kulungele iingcali zeshishini, inene, abafana, namakhwenkwe. Nangona kunjalo, unokucela i-barber yakho ukuba yenze i-taper ephantsi iphele kakhulu kwaye ibe nomdlandla ngokugqitywa kolusu. I-bald fade iyakucoca ezantsi kwetaper kwisitayile esipholileyo.
Ukuphela kweTaper ephezulu
I-taper fade ephezulu yeyona mfutshane yokucheba iinwele ungazama. I-taper ephezulu iqala nje ezantsi kweenwele ezinde ngaphezulu, kwaye ihlala itheyipa ngokukhawuleza ukujonga okuphezulu. Ngokubanzi, ukuphela okuphezulu kujongeka kubhetele ngezitayile zangoku ezinje ngombala ovunyiweyo, isityalo saseFrance, ifeksi yefeksi, iinwele ezinamabala, kunye nokusikwa kwe-buzz.
Ngapha koko, ukuba ufuna iinwele ezimfutshane, i-taper fade ephezulu inokukufumana umahluko oyimfuneko ukujonga amehlo kwizinwele ezimfutshane ezibhalwe ngaphezulu. I-Sleek, i-trendy, kunye ne-badass, inwele ephezulu yokufota inikezela ngesinqe esimnandi kunye nesitayile esiya kujongeka silungile kwii-hipsters, amakhwenkwe amabi, ukuphazamisa abafana abancinci.
Ubungakanani obuphakathi obuphakathi kukucheba iinwele kubafana abafuna ulonwabo oluphakathi phakathi kokuphela okuphezulu kunye okuphantsi. I-taper esembindini iqala embindini wentloko kunye neenwele zebuzzes ngeenxa zonke. Ukucoceka nokutsha, ukucekeceka okuphakathi kujongeka kubungcali kwaye kusefashonini.
Tshatisa iinwele eziphakathi ezipheleyo kunye ikama ngaphezulu , brasha umva, vutheleka , okanye iinwele zomphetho zokuthatha ithuba ngamacala amafutshane, iintsingiselo zeenwele zamadoda eziphezulu. Ukugqitywa okubukhali kunye nokubukhali, cela i-barber yakho ngomgca phezulu emacaleni.
I-Taper Fade + iinwele ezinde
Ukusuka kwizimbo eziphakathi ukuya kwezide, i-taper fade ijongeka ilungile ngeenwele ezinde. Njengelinye lawona macala mafutshane afanelekileyo, iinwele ezinde ezinde, ukufota kweenwele ezinde kukhulisa umahluko emacaleni nasemva ukuze ujonge amehlo akho kwisitayile esingentla. Ubude obuphakathi ukuya kwizinwele ezinde zikwanikezela ngamathuba okusebenza ngokungafaniyo, inika abafana amandla okuzama izimvo ezahlukeneyo zezinwele.
Ukuba uzimisele ukuzama iindlela zamvanje, iindlela ezenziwe ngombala kunye nezimdaka zikhangeleka kakuhle kwaye ziqhelekile. Zama umtya omde, ikama ngaphezulu, utyibilika umva, ibrashi phezulu, i-faux hawk, okanye isitayile esivelisiweyo I-taper yeenwele ezinde kufuneka ilunge ngokwendalo.
Buza umchebi wakho ukuba acebise i-taper efanelekileyo yokucheba iinwele kunye neenwele ezinde ngaphezulu eziza kulunga ubuso bakho, ubude beenwele, kunye nohlobo.
I-Taper Fade + iinwele ezimfutshane
Izinwele ezimfutshane zifuna i-taper fade haircut emacaleni nasemva. Ukufumana umahluko kumacala aza kugxininisa ukunqunyulwa kweenwele ezimfutshane ngaphezulu, abafana baya kufuna ukuphela okufutshane kakhulu. I-taper ephezulu yesikhumba ephelayo kunye nokugqitywa kokucheba kungenza inkohliso.
Ukusuka kwindawo ephezulu kunye nokuxinana ukusikwa kwe-buzz, i-toptured crop crop, kunye ne-crew cut, zininzi iindlela ezigqwesileyo zokufaka isitayile sokuphela ngeenwele ezimfutshane. Yongeza imilo ecaleni kwentloko yeenwele ukonwabela ukomelela okungaphezulu okubukhali, okuqhelekileyo.
Ukuphela kweTaper Bald
I-bald taper fade ilula, igudile kwaye intle iinwele zamadoda. Ukuchetywa kwesikhumba, i-bald fade ingongezwa kuyo nayiphi na i-taper cut yokusika okucocekileyo, okusondeleyo. Njengezinye iintlobo zokuphela, i-bald taper inokuba sezantsi, ephakathi okanye ephezulu.
Ukuba ukhangele ukufiphala okufutshane okudibanisa iinwele kulusu lwakho, thetha nenwele yakho malunga nokuba ngaba i-bald taper fade haircut ilungile kwinkangeleko yakho. Izitayile ezisikiweyo ngokugqibeleleyo zamadoda anazo zonke iintlobo zeenwele, ezinje ngokuthe nkqo, wavy , zingqindilili , ebhityile, kunye iinwele ezinekhelizi .
Ulusu lweTaper Fade
I-taper fade fade inesibindi kwaye inemvukelo, kwaye inikezela ngenwele emfutshane kakhulu yokuphela kwamadoda. I-taper yesikhumba isebenza kakuhle ngokuphezulu, phakathi, kunye nasezantsi. Ukuphela kolusu oluphantsi kunika umnxeba wangoku kunqunyulwe ixesha elide, ngelixa ulusu oluphezulu luphela ludla ngokuhluka kakhulu.
Okokugqibela, zininzi iinwele zamadoda ezipholileyo ezibonakala zintle ngesikhumba se-taper fade haircut, kubandakanya izitayile ezimfutshane nezide ezinje ngobuqhophololo, icala elisecaleni, ispiked ngaphambili, umphetho, ibrashi phezulu, phezulu phezulu, Afro, kunye mohawk.
Inkqubo ye- ikama ngaphezu kweenwele wenze ukubuya okukhulu kule minyaka idlulileyo njengenye yeenwele ezilungileyo kakhulu emadodeni. Ismart, intle kwaye ijongeka intle, ikama ngaphezulu kwetaper lisebenza kakuhle ngeentlobo ezahlukeneyo zeenwele kunye nobude.
Zama Ikama liphele kwaye ungeze kwindawo enzima, umgca ochetyiweyo, ukumila, okanye iindevu ezipheleleyo zokuthinta ubudoda.
Ukupheliswa kweTaper Fade
I-blower taper fade ihlala isikwa ngeenwele ezimfutshane ukuya kubude obuphakathi ngaphezulu, ngamacala amafutshane kakhulu acinyiweyo. I-toutout ye-blowout taper ihlala ibhalwa phezulu kwaye ibuyiswe ngemveliso elungileyo yeenwele efana ne matte pomade , i-wax okanye udongwe. Abafana abaneenwele ezingqindilili bayayithanda indalo, ukugqitywa kokulungiswa kwempuku.
I-Taper Fade Afro
I-Afro ihleli iyindlela eyaziwayo yokwenza iinwele ezimnyama. Uphefumlelwe kwaye uyaphuma, i-Afro taper fade haircut iqala ngokusikwa okuphantsi okanye okuphezulu emacaleni ukuthelekisa iinwele ezingqindilili, ezinamakhanda ngaphezulu.
Fumana umgca phezulu kwimiphetho ebukhali, uyilo lweenwele ngenkangeleko eyahlukileyo, okanye icandelo lotyando lichetyiwe emacaleni ukulungelelanisa isitayile kubuntu bakho. Njengezinwele ezipholileyo zamadoda amnyama, awungekhe uhambe gwenxa ngeAfter tapered.
Ukuphela okuphezulu okuphezulu kukwahluka okwahlukileyo kweAfro kunye neflethi ephezulu. I-taper fade enqunyiwe emacaleni igxininisa iinwele ezinde ezixutywe ngqo.
Olona taper luphezulu lwalukhe lwabonisa ubudala begolide bomculo wehip hop kwaye ke lwaluthandwa kakhulu phakathi kwamadoda amnyama amnyama.
Iinwele eziTyiweyo eziTyhafileyo ziyaphela
Ngelixa iinwele ezijijekileyo ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukusebenza nazo, ukuziphelisa kunye nokusika okufutshane kunokwenza ukuba ii-curls zilawuleke ngakumbi kwaye zinganciphisi. I-curly hair taper fade ivumela abafana ukuba baqale ngononophelo olusezantsi, iinwele ezilula emacaleni kunye nesitayile seenwele zabo kumngqungqo, isityalo esenziwe ngombala, okanye iinwele ezimdaka.
Sebenzisa i-curl eyonyusa ikhrim okanye ipomade eyomeleleyo ukulawula eyakho iinwele ezisikiweyo ziyaphela ngenkangeleko egqityiweyo ebambe yonke imini.
Itafile yetempile iyabuna, ekwabizwa ngokuba yi ukuphela kwetempile Inwele yodidi eqala kufutshane nomphezulu wenwele kwiitempile zakho kwaye ngokukhawuleza uthinte amacala.
Ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yiBrooklyn fade, i-temp taper ihlala idityaniswa ngomda wokucoca okucocekileyo, okutsha okuphelileyo.
I-taper fade undercut idibanisa ezona ndlela zilungileyo zokucheba iinwele zamadoda. Ngelixa i-undercut ibuzzs emacaleni macala onke kwaye inciphisa iinwele ubude obunye, i ukuphela kwendlela thinta ukusikwa kunye nokudibanisa inkangeleko.
ukuvumisa ngeenkwenkwezi izindlu zokubala
Ukusuka kwikama ukuya kwi-back slicked, i-undercut taper fade inokuguqula isitayile sakho sangoku sibe yizinwele ezintsha ezipholileyo.
Icandelo elisecaleni iTaper Fade
Icandelo elisecaleni le-taper fade luguqulelo lwangoku lwesitayile esiqhelekileyo. Eyaziwa ngokuba yi-gentleman's haircut, i-side part taper inikeza ukubukeka kweklasi kunye nobuhle obuya kuguquka ngokulula ukuba bubuhle kwaye buhle.
Kubaqalayo, abafana banokufumana ukuphela kwabo ngenxalenye. Kwaye endaweni yenxalenye ethe tyaba kwelinye icala, indoda yanamhlanje inokusebenzisa imveliso yeenwele ezenziwe ngombala kwisiphelo esivulekileyo, esingaqhelekanga. Ngevolumu engaphezulu kunye nokuhamba kunesitayile sendabuko, icala elisecaleni liphela linikezela ngokuguquguqukayo.
Iibhokisi zomntu zihlala zikhangeleka ngcono ngetape emacaleni. Nokuba ufuna iinwele ezimfutshane okanye ezinde ezolukiweyo, i-taper fade ecocekileyo inokwenza ngokwenyani ikona yakho Yima geqe. Ukusuka kwibhokisi yamagada ukuya uloyiko , zama i-taper ngenwele yakho eboshiweyo.
Isityalo saseFrance siPhezulu + kwiTaper Fade
Isivuno saseFrance ibiyiyo yonke ingqumbo eYurophu. Isiciko sesityalo esifakiweyo sifana nokusikwa kwenqanawa, kodwa iinwele ezibrushwe ngaphambili kwaye zidityaniswe nomphetho omfutshane ngaphambili, iinwele ezimfutshane zilula kodwa zishushu.
Ngokwendalo, iinwele ezimfutshane zidinga ukubola okufutshane kumacala ngokwahluka okuyimfuneko. Ukuqaqambisa isitayile esinqunyiweyo, khetha i-taper ephezulu.
Umkhwa weTaper Fade
I-slip back taper yenye yeenwele ezinkulu zamadoda. Ukuba awufuni ukuba ulusu luphele okanye lube ngaphantsi kumacala, ukubuyela umva kwetaper fade kunokukufumanela oku kukhangeleka, kujonge ukubukeka. Umkhabi kukuba isitayile esibuyileyo sibuyele ngokugqibeleleyo ngeenwele ezimfutshane, eziphakathi okanye ezinde.
Abafana abaneenwele ezingqindilili kufuneka basebenzise ipomade eyomeleleyo okanye ukhilimu ngokuqaqamba okuphezulu kwinguqulelo ye-retro. Ngaphandle koko, i-matte wax okanye udongwe lunokwandisa ubungakanani, ivolumu kunye nokuhamba. Xa isitayile sendalo, ngamanye amaxesha kunokubizwa ngokuba yibrashi ebuyayo.
Ukuhlawula iTaper Fade
I-quiff taper yenza isitayile esingapheliyo. Kule mihla, i-quiff iza namacala acociweyo kunye nokugqitywa okulungiselelwe. Isitayile phezulu nasemva yevolumu elungileyo kunye nentshukumo, i-quiff fade ihlala ifashoni.
I-pompadour taper fade iza ngeendlela ezininzi, kodwa zonke zifuna ubukhazikhazi ngaphambili kunye neenwele ezimfutshane kancinci ngasemva. Amacala atshintshiwe amafutshane ukugxininisa isitayile esahlukileyo.
Nokuba uneenwele ezimfutshane okanye ezinde, esinye isibonelelo se-pompadour fade kukuba unokutshintsha ngokulula ukujonga kwakho kunye nesitayile se-quiff, ikama ngaphezulu okanye i-faux hawk hawk efanayo.
Ukuphela kweTaper ngeCandelo
Indlela epholileyo yokulungisa iinwele zakho kukufumana i-taper fade ngenxalenye. Inxalenye enzima inokuchetywa kumgca wendalo apho wahlula khona iinwele zakho kwelinye icala, okanye inokubekwa kwindawo yakho yokuphela ngaphambi kokuba umchebi wakho aqale ukudibanisa iinwele.
Ukuba ufuna ukuzama ukusika okwahlukileyo, xelela i-barber yakho ukuba ufuna ukuphela kunye nenxalenye yomgca.
Umgca weTaper phezulu
Umgca weTaper uphungula kwaye uhlambulule iinwele zakho ezingqonge intloko yakho kunye neetempile zakho ukwenza imigca ebukhali kunye nemiphetho. Ikwabizwa ngokuba yimilo okanye inyuse phezulu kwiindawo ezahlukeneyo zokucheba kwihlabathi liphela, i-taper fade line up yongeza i-badass touch yoyilo olubukhali.
Qaphela nje ukuba ungadinga ukunqunyulwa rhoqo ukugcina imigca isikiwe icocekile kwaye intsha njalo Isandi sika-Andis T-Outliner kunokuba luncedo ukuba nasekhaya.
Amacandelo amafutshane kunye neTaper Back
Amacala amafutshane kunye nokubuyela umva ngumzekelo ogqibeleleyo wendlela elungileyo yokuphela kweenwele ezinokuthi zizalise ezona ndlela zilungileyo zokuhombisa zamadoda.
Umnumzana uTaper Fade
Inwele yomnumzana ene-taper fade emacaleni inokuguqula isitayile esidala sibe yimbonakalo yanamhlanje. Ngesi sizathu, uninzi lweenwele zamva nje zibandakanya i-taper okanye ukuphela.
Amacandelo eTapered + Ede phezulu
Ezona zimvo zilungileyo zokucheba iinwele zamadoda ziqala nge-taper fade emacaleni ngeenwele ezinde ngaphezulu. Amacala amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu zivelise ukusikwa okuphezulu kunye nezitayile ozibonayo namhlanje. Eyona ndlela iphawuleka ngakumbi yokwenza iinwele zesitayile ngoku kungcolile kwaye kulungisiwe.
Intamo yeTaper Fade
Uyilo lweenwele ezisekwe entanyeni lunokubonakala ngesibindi kwezinye; abanye baya kukhetha i-taper yemveli yentamo. Ukugqitywa kokucoceka okucocekileyo nakweyiphi na inwele, i-taper fade fade inikezela ngenkangeleko entsha ngasemva.
I-taper fade e-brushed up is a balance balance phakathi kwe-blowout kunye ne-spiky hair. I-brush up fade isebenza kakuhle ngeenwele ezingqindilili, kwaye inika ukhetho olungenamandla. Ngobuninzi bobunzima, ivolumu kunye nokuhamba, sebenzisa ukhilimu okhanyayo okanye imousse.
Ukuba ufuna ukugcina iinwele ziphakame imini yonke, sebenzisa indawo yokubamba phezulu ukuya phezulu okanye i-wax ephantsi ukuze ingakhanyi. Zibethe zome iinwele zakho endaweni.
I-drop taper fade yinguqulelo yeklasi yokuphela ejikeleze iindlebe kwaye yehle entanyeni. Idropha iphela emva koko idibanise iinwele emva kwendlebe ide ifike emqaleni.
I-arc epholileyo eyenziweyo inika le fade iinwele igama layo. Unokwenza nayiphi na into yokulahla i-taper ukuze ubuze umchebi wakho ukuba ujongeka ulungile na.
I-Taper Fade Mohawk
I-taper fade mohawk inokuba yeyona nto iphikisayo kunye nenwele kolu luhlu. Naluphi na uhlobo lwenwele ye-mohawk ime kwisihlwele.
Ngethamsanqa, ukuba awufuni macala achetyiweyo, ungakhetha kwi-mohawk ephezulu, ephakathi, ephantsi okanye ye-temp fade.
Icala elitshintshiweyo leTaper Fade
Icala iinwele ezitshayisiweyo ibilikhonkco elitsha elipholileyo kubafana kulo nyaka. Ngokudibanisa i-taper fade kunye ne-hairstyle etshayelwe ecaleni, ungonwabela ngokulula ukuyifumana, ukujonga isitayile ngokulula.
Gxobhoza phezulu kwaye uye ecaleni okanye wahlulele kwelinye icala, icala elitshayelweyo liyi-chic kwaye limnandi.
Zininzi iindlela zokwenza ukuba i-neckline yakho ilungiswe. Ukukhula ekuthandeni yi-neckline ye-tapered. Ngokungafaniyo nokusikelwa okujikeleziweyo, isikwere okanye okusikiweyo, i-neckline taper iphela ngasemva ngaphandle komthungo kulusu lwakho. Ukuba ufumana i-taper fade emacaleni, cela i-barber yakho intamo ye-tapered.
iibraids zeenwele zamadoda